❤️ Ahoana ny fomba hanampiana tantara ao amin'ny Instagram - Winches Club
Mandrak'izao, nisy foana ny fisafotofotoana momba ny fomba fametrahana tantara Instagram. Raha mandefa ny tantaranao voalohany ianao mandritra ny fotoana fohy, azonao atao ny manindry + amin'ny sarin'ny mombamomba anao ary azonao atao ny manampy sary na horonan-tsary fohy amin'ny tantaranao.
Fa rehefa vitanao izany, ny + manjavona. Dia inona no ataonao rehefa te handefa tantara hafa ianao ?
Misaotra ny fanavaozana Instagram vaovao, somary voavaha io olana io. Mora kokoa sy mora kokoa izao ny mamoaka tantara, ary misy fomba telo lehibe:
Kitiho ny famantarana + araka ny aseho etsy ambony – mety ho tantara vaovao ihany
Swipe avy amin'ny hafatrao
Peho ny kisary fakan-tsary eo an-tampony havanana.
Niharihary fa niaiky ny Instagram fa ireo mpampiasa azy, indrindra fa ny olona tsy Instagrammers mafana fo, nahatsapa fisavoritahana lehibe. Raha mila topimaso haingana momba ny fomba tsirairay ianao, jereo ny torolàlana misy fizarana telo eto ambany.
Tantara Instagram avy amin'ny sarin'ny mombamomba azy
Ity iray ity dia tsara amin'ny famoahana tantara haingana, fa mandeha ihany raha tsy nandefa tantara teo aloha ianao tao anatin'ny 24 ora farany. Azonao atao ny mampiasa an'io fomba io avy amin'ny fahanao na pejy mombamomba anao.
Tsindrio fotsiny ny sarinao amin'ny mombamomba anao miaraka amin'ny marika +.
Afaka maka sary na horonan-tsary ianao na mampakatra iray.
Avy eo tsindrio ny tantaranao eo amin'ny farany ambany havia ary havoaka ny tantaranao.
Mandefa tantara miaraka amin'ny kisoa miankavanana
Efa endri-javatra foana izany, fa raha tsy fantatrao fa misy, tena sarotra hita izy.
Tariho mivantana mankany amin'ny fahanao fotsiny.
Maka sary na ampidiro ao amin'ny tranomboky.
Tsindrio ny tantaranao eo amin'ny farany ambany havia dia havoaka.
Mandefa tantara amin'ny fipihana ny fakantsary eo an-tampony havanana
Ity dia endri-javatra vaovao lehibe avy amin'ny Instagram ary midika izany fa afaka mandefa tantara amin'ny fomba intuitive kokoa ny olona ankehitriny.. Azonao atao izany avy amin'ny lahatsoratrao.
Avy amin'ny hafatrao, tsindrio fotsiny ny kisary fakantsary eo ankavia ambony.
Misafidiana sary na video hampiasaina.
Kitiho ny tantaranao dia havoaka ny tantaranao
Ny tombony amin'ireo fomba roa farany ao amin'ny lisitra dia ny ahafahanao mampiasa azy ireo hanampiana sary na horonan-tsary fanampiny amin'ny tantaranao, na dia efa nandefa iray aza ianao. Tsy hahomby ny fomba voalohany raha toa ka efa manana Instagram Live Story ianao.
Lahatsoratra teo alohaRahoviana no fotoana tsara indrindra handefasana amin'ny Instagram ?
Lahatsoratra manarakaInona avy ireo Bots Instagram tsara indrindra amin'ny 2020 ary ny fomba hiarovana ny kaontinao?